ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: အသိုက် နှင့် အမေ့အလွမ်းသင်ရိုး တမ်းချင်း
စာရေးသူ Unknown အချိန် 10:42 AM
Unknown May 9, 2010 at 1:32 PM
အမေနေ့ကို သတိတရ ကဗျာလေးရေးတင်တာ လေးစားပါတယ်ဗျာ
ကိုလူထွေး May 9, 2010 at 3:33 PM
အခုလို အမေနေ့မှာ အမေကို တမ်းတ အလွမ်းပိုနေရမယ်ဆိုတာကို တွေးမိယုံနဲ့တင် ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ် ကိုချမ်းရေ...
မြတ်မွန် May 9, 2010 at 3:38 PM
ကိုချမ်းကဗျာလေးက လှတယ် ကိုချမ်းရေ..
ညလင်းအိမ် May 9, 2010 at 8:21 PM
ကိုချမ်း ရေ အမေကို ချစ်တဲ့ သားတယောက်က အမေ့ကို လွမ်းဆွတ်တမ်းတ သတိရနေသလို ... အမေကလည်း သူချစ်တဲ့ သားကို တမ်းတ သတိရနေမှာပါ ...
အမေနေ့အတွက် ကဗျာလေးကို ခံစားသွားပါတယ် ခင်ဗျာ ..
Nge Naing May 9, 2010 at 11:41 PM
အမေနေ့ ကဗျာလေးကို အမေနေရာကနေ လာခံစားသွားပါတယ်။ အမေကိုကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ သားများအားလုံး လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝပါစေ။ ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ သားသမီးတွေရဲ့ မိခင်တွေ နှလုံးစိတ်ဝမ်း ငြိမ်းချမ်းကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မိုးစက်အိမ် May 10, 2010 at 6:05 AM
အမေနေ့ အမှတ်တရ ကဗျာ လေးတွေနဲ့ အတူ
ထပ်တူခံစားသွားပါတယ် အစ်ကိုရေ . . .
နိုင်တဲ့သားလိမ္မာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေဗျာ . . .
မောင်သီဟ May 10, 2010 at 8:48 AM
အမေကို ချစ်တဲ့ သားတယောက်က အမေ့ကို လွမ်းဆွတ်တမ်းတ သတိရနေသလို ... အမေကလည်း သူချစ်တဲ့ သားကို တမ်းတ နေမှာဘဲနော်....................